रचनाले लेखिन मार्मिक स्टाटस- आजबाट तपाईंहरु सबैकी ‘रचना’ भएकी छु !
चर्चित गायन रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’को टप सातबाट झापाकी रचना रिमाल आउट भएकी छन् । उनि भोट कम भएपछि शो बाट आउट भएकी हुन् । यद्यपी यस अघिको भोटिङ्गहरुमा रचनाले अ’त्याधिक भोट पाउदै आइरहेकी थिइन ।
स्टेजबाट बाहिरीदा उनि लगायत जज र प्रतिष्पर्धीहरुको आँखा रसाए । उनि नेपाल आइडलबाट बाहिरिदै गर्दा भक्कानिएर रोएकि थिइन्। भने उनले अाफ्नो फेसबुकमा मार्मिक स्टाटस लेखेकि छन् ।
रचना रिमालले लेखेको स्टाटस् जस्ताको त्यस्तै:
समपुर्णमा नमस्कार !
नेपाल आइडल सिजन थ्रीमा आज देखि मेरो यात्रा सकिएको छ । सर्वप्रथम त उत्कृष्ट ७ हुँदै अर्को चरणमा प्रबेश गर्नु हुने मलाई अत्यन्तै माया गर्नु हुने प्रतिभाशाली दाइ दिदीहरुलाई हार्दिक बधाई ।
तिनै जना निर्णायक ज्यु प्रति म संग आभार प्रकट गर्ने शव्द नै छैन, नेपाली संगीतका धरोहर न्हु सरले मेरो घरमै आएर मलाई सुनी दिनु भएको दिन देखि आज सम्मको यात्रामा हजुरहरुले बढाउनु भएको हौशला, दिनु भएको ज्ञान र देखाउनु भएको बाटो मेरालागि मार्गदर्शक हुनेछ्न । मलाई प्रस्तुतिकालागि तयार पार्नु हुने मेन्टर, प्रस्तोता दाइ दिदी र आइडलका सम्पुर्ण सदस्य ज्यु हरु प्रती सदैब कृतज्ञ रहनेछु ।
आजबाट तपाईंहरु सबैकि “रचना” भएकी छु, यो माया कहिले कम नहोस् । धन्यवाद धेरै माया
धेरै कुरा सिक्न पाएको छु, अझै सिक्न बाकी छ, आगामी दिनमा आत्मविश्वास उच्च राख्दै संगीत साधनामा अगाडी बढी राख्ने छु । हजुर हरुको मायाको ब’दला कुनै दिन हजुरहरुलाई गर्ब गर्ने मौका दिन सके भने आफुलाई सफल सम्झिने छु । हिजो सम्म मेरो परिवारको मात्र थिए, आजबाट तपाईंहरु सबैकि “रचना” भएकी छु, यो माया कहिले कम नहोस् । धन्यवाद धेरै माया ।